Jurgen Klopp: Balotelli koox ha raadsado - BBC News Somali
Jurgen Klopp: Balotelli koox ha raadsado
Image caption Mario Balotelli ayaa ahaan jiray laacib lagu xisaabtamo balse hadda way ka jajabantahay
Tababaraha kooxda Liverpool, Jurgen Klopp ayaa Mario Balotelli u sheegay in uu koox kale raadsado.
Ciyaaryahankan Talyaaniga u dhashay ee 25 jirka ah oo sanadkii hore ammaah kula joogay kooxda AC Milan ayaa hadda ku soo laabtay Liverpool si uu kooxda ula qaato layliga xilli ciyaareedka kahor la qaato.
Ciyaaryahankan oo horay Manchester City weerarka uga dheeli jiray ayaa 4 gool oo kali ah u dhaliyay Liverpool tan iyo markii uu ku soo biiray 2014-kii.
Klopp ayaa sheegay in marxaladda uu marayo ciyaaryahankan aysan ahayn heerkii uu ka mid noqon lahaa shan ciyaaryahan oo hal boos ka dhaxeeyo.
Sidaas daraadeedna ay caddahay in xal loo baahan yahay, ayna jiri doonto koox ku faraxsan in ay helaan Mario Ballotelli.
Balotelli wuxuu dhaliyay saddex goo loo kali ah isaga oo 23 ciyaarood amaah ugu saftay San Siro xilli ciyaareedkii hore, lagumana soo darin xulka qaranka ee Talyaaniga ee ka qayb galay tartankii koobka Qaramada Qaaradda Yurub.